साथीहरुसंग भेट हुँदा लूसूनले डाक्टरी पेशा छोडेर किन राजनीतिमा लागे? क्यानाडाको नागरिक नर्मन बेथुनले चिनिया क्रान्तिमा कसरी योगदान दिए? भन्ने बारेमा चर्चा हुने गर्दथ्यो । बिद्यालय र कलेजहरुको बुर्जुवा शिक्षाले बास्तवमा शोषित पीडित जनताहरुलाई फायदा गर्दैन भन्थे साथीहरु । महेशमानले सवैलाई चटक्कै छोडेर चीनमा डाक्टर पढ्न गएको गलत थियो भनेर बारम्बार चर्चा हुने गर्दथ्यो । एक दिन, दुई दिन, तीन दिन गर्दै ती कुराहरुले मेरो किशोरी दिमागमा गहिरो छाप पार्दै गयो । ममा बिस्तारै क्रान्तिको साहित्यमा रुचि बढ्दै गयो । मैले ह्दयचन्द्र सिंह प्रधान देखि चीनका ल्यूहुलान, ओयाङहाईको गीत, रातो तारा, रेडबुक देखि लिएर रुसका आमा, अग्नीदिक्षा, बिश्व ईतिहास जस्ता कितावहरु हरेक दिन पढ्न थालें । किताब पढ्ने लतले छोए पछि नसिद्धिए सम्म नछोड्ने भएँ र बर्षमा दर्जनौं कितावहरु पढें । कितावका आदर्शवादी र क्रान्तिकारी पात्रहरुप्रति मेरो आकर्षण बढ्दै गयो । त्यसमा थप गीत, कबिता र विभिन्न छलफलबाट ममा एउटा भरभराउँदो क्रान्तिकारी बन्छु र देशमा परिवर्तन ल्याउन सक्छु भन्ने अटोठहरु पनि बिस्तारै पलाउँदै गयो ।
श्याम प्रसाद शर्मा समूहमा आवद्ध हामी तीस चालिसजना साथीहरु मध्ये मैले पढाई छोडेकी थिईन । २०३२ । ०३३ सालमा म पद्म कन्या कलेजमा आईए पढ्थें । मेरो पढाई राम्रो पनि थियो । साथीहरु पनि एक से एक पढैया थिए । यता क्रान्तिकारी साथीहरुको संगतमा परे पछि आफूले पढाई नछोडेको प्रति ग्लानी बढ्दै गयो । पढाई छोड्ने कि निरन्तरता दिने भन्ने प्रश्नले भित्र भित्रै सताउन थाल्यो । दुईवटा बाटो मध्ये एउटा छान्नु पर्ने निर्णय गर्नु सजिलो हुँदो रहेनछ । एकातिर पढाईको कारणबाट प्राप्त आमाबाबु, परिवारजन र साथीहरुको माया, सम्मान र साधन, श्रोत लगानीको पक्ष, अर्कोतिर क्रान्तिका महान सपना बोकेका दृढ साथीहरुको संगत । दुईमध्ये एक छोड्नु पर्दथ्यो । एकातिर मेरो बुझाईमा मेरो र परिवारको लागि शिक्षा, अर्कोतिर सम्पूर्ण जनता र देशको लागि त्याग । पल्लाभारी दोश्रोमा पाएँ र मैले साथीहरुसंग बुर्जुवा शिक्षा त्यागेको घोषणा गरें । त्यो दिन देखि म दोधारमा बस्नु नपर्दा मन हलुका भयो । मेरो क्रान्तिको बाटो खुल्ला भयो । तर घरमा भने सजिलो बनेन । बिसं २०३६ मा त्यो समूह तत्कालिन नेकपा मालेमा बिलय भयो र त्यसको लगत्तै कार्तिक महिनामा पार्टीको सदस्यता लिएँ ।
बिसं २०२८ साल (समूहमा सम्पर्क भएको समय) देखि २०४२ सालसम्म मैले पार्टीको लागि केन्द्र देखि जिल्ला र टोल सम्मको पार्टी संगठन, जनबर्गिय संगठन, सेल्टर व्यवस्थापन, पार्टी प्रेस, घरमा र अन्य स्थानहरुमा बैठकहरु मिलाउने, जेलमा सम्पर्क गर्ने, पत्रिका, पर्चा, पोष्टर निकाल्ने, लेख रचनाहरुको प्रतिलिपि बनाउने, पार्टी दस्तावेजहरु टाईप गरी छाप्ने, पत्रिका प्रकाशन लगायतका जिम्माहरुलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्दै आएकी थिएँ । त्यसो गर्दा कहिले काहिँ त चौबिसको चौबिसै घण्टा पनि काम गर्नु पर्दथ्यो । मेरो घरका सवै दराजहरु पार्टीका किताव र पार्टीका प्रकाशनहरुले भरिएका हुन्थे । त्यो बाहेक आर्थिक सहयोग नियमित रुपमा दिने गर्दथें ।
बुर्जुवा शिक्षा छोडेको करीब एक दशक भित्र देशको राजनीतिले केहि महत्वपूर्ण परिवर्तनहरु हासिल गरीसकेको थियो । २०३६ को आन्दोपछिको केहि खुला राजनीतिक परिस्थिति, ठूला राजनीतिक सभाहरुको आयोजना, विभिन्न जनबर्गिय तथा पेशागत संगठनहरुको उदय र तिनीहरुका सम्मेलनहरुको आयोजनाहरु खुल्लै गरेको अनुभव बटुलीएका थिए । ती संगठन, सभा र सम्मेलनहरुमा मेरो प्रत्यक्ष वा परोक्ष नेतृत्व र सहभागिता हुन्थ्यो । त्यसवापत पटक पटक पक्राउ र जेल पनि परेकी थिएँ । त्यसमध्ये ललितपूर जिल्लाको पार्टीको सचिव र उपत्यका कमिटीको सदस्य भएर काम गर्दा थप गर्व लाग्ने गर्दथ्यो । किनकि भुमिगत कालको पार्टीको ईतिहासमा पहिलोपल्ट महिलाले पार्टीको जिल्ला सचिव भएर काम गरेको मैरै पालामा थियो ।
देशको राजनीति मात्र छिपिंदै गएको होईन, मेरो उमेर पनि छिपिँदै गएको थियो । म एक किशोरीबाट युवा महिलामा परिणत भएकी थिएँ । समयक्रममा बिहे भयो, श्रीमन थपियो, जोश अझ थपियो । बिबाहका दिनमा समेत हामी दुबैले देश, जनता र पार्टीको लागि जीवन दिन सपथ खाएका थियौं ।
त्यतिन्जेलसम्म पार्टीले मेरो लागि कुनै खर्च गर्नु परेको थिएन । तर २०४३ सालमा मेरो जेठो छोरो जन्मेपछि मात्र पार्टीगत हिसावले म एक्लै छु भन्ने अनुभुती भयो । आमा बनेको नाताले मेरोमा जिम्मेवारी थपेको थियो । हिजो पार्टीको लागि धेरै दिन सक्थें, आज छोरोले मागेको कुरा पनि दिन नसक्ने भएँ । परिवारलाई त मैले पार्टी छ, साथीहरु छन् मेरो चिन्ता गर्नु परेन भनेर ढाडस दिएकी थिएँ । तर मेरो दैनिक जीवनमा परिवर्तन आएको कुराले मैले समस्या भोगिरहेकी छु भन्ने कुरा पार्टीका नेताहरुले हेक्का सम्म पाएनन् । मेरो पनि आफ्नै स्वभाव थियो, गनगन गरेर अरुको अगाडी हात पसार्न नजान्ने । माईती छँदा चामलको भकारी वा कुथीमा अन्न भरीएको देख्थें सँधैं, भोजभतेर खुब खान्थें । बच्चा भए पछि बल्ल थाहा भयो, पार्टीमा गरिने सहयोग एकतर्फि हुँदो रहेछ । बच्चाको कारणले मैले दिनको चौबिसैघण्टा समय दिन नसके पछि, पार्टीका नजिक भनिने साथीहरु पनि गनगन पो गर्न थाले । मलाई सहानुभुती र सहयोग गर्ने कुरा त सपनाको भैगयो । तर मैले हरेस खाईन । श्रीमान समेतको सल्लाहमा शिक्षक पेशालाई निरन्तरता दिंदै मैले पुन आईए, बिए, बिएड जाँच दिई पास गरें । पढाईको कामलाई अघि बढाए पछि धेरै मुश्किलको सामना गर्नु पर्दथ्यो । खास गरी परिक्षा दिने समयमा । श्रीमान एक पछि अर्को अञ्चल घुमेर पार्टी काम गर्नु पर्ने भएकोले मैले बच्चा हुर्काउँदै पढ्नु पर्दथ्यो । जाँचकै दिन झन च्वाँ च्वाँ रोएको बच्चालाई छोडेर जानु पर्दा मन असाध्यै भारी हुन्थ्यो । राजनीतिक काममा हिड्दा भने बच्चा बोकेरै जाने गर्दथें । धेरै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा नातादारहरुकहाँ बच्चा छोड्थें ।
२०४६ सालमा पार्टीहरु भूमिगतबाट खुला भए पछि पार्टीले खुला र भुमिगत कार्यकर्ताहरुको व्यवस्थापन गर्ने, प्रतिपक्षमा रहेर गरिने भुमिगत राजनीतिक काम र खुला सत्ता साझेदारी भएर गरिने काम, महिलाको जिम्मेवारी र पुरुषको जिम्मेवारीका चुनौतीहरुका बिश्लेषण र त्यसको उचित संयोजन गर्दै लैजानु पर्दथ्यो । तर त्यसो भएन । पार्टीको कार्यालय खुलिसकेपछि पार्टीको कार्यालय कब्जा गर्ने, जिल्ला नजाने, अरुलाई आदेश दिई बाहिर बाहिर खटाउने र पार्टी भित्र हाली मुहाली गर्ने मुखियासाहेबी राजनीति र नेताहरुको अघिपछि धाएर खुशी पारी स्वार्थ पूरा गर्न दलाली गर्ने समूह, त्याग, बलिदान, सर्वहाराकरणको कुरा गर्दै सुबिद्याको पद कहिल्यै नछोड्ने, शिक्षा आर्जन गर्ने, जागिर खाने र व्यवसाय गर्न खोज्नेलाई बुर्जुवाको उपमा दिई पार्टीबाट पाखा लगाउने लफुङगो राजनीति गर्ने समूह पनि देखा पर्यो । मैले यी कुराहरुको बारेमा पार्टीको तत्कालिन अध्यक्ष कमरेड मनमोहन अधिकारीसंग कुरा राखेकी थिएँ । तर पार्टीमा हालिमुहाली अर्कैको चल्ने भएकोले वहाँको केहि शिप लागेन । पार्टीको पाँचौ महाधिवेशन पछि त विवेक र विचार छोडी जहाँ बहुमत हुने सम्भावना देख्यो, त्यसैको पछि लाग्ने, पार्टी र सरकारको पद प्राप्त गर्ने र अल्पमत वा मत बाझेको नाममा भेदभाव र दमन गर्ने शैलीको बिकास भयो । त्यसले पार्टी र सत्ताको राजनीतिमा खास खालका व्यक्तिहरु हावी हुन पुग्यो ।
मैले अंगे्रजी बिषयमा स्नातकोत्तर पढ्ने बिचार गर्दै त्रिभुवन विश्वबिद्यालय किर्तिपुरमा भरना भएँ । भरना त भएँ तर घरमा पढ्ने समय हुँदैनथ्यो । बिश्वबिद्यालयमा पढ्ने वातावरण हुँदैनथ्यो । म जस्तो अनियमित पढ्ने बिद्यार्थी र नियमित पढ्ने बिद्यार्थीहरु बिच क्रमश अन्तरालहरु बढ्दै जाने रहेछ । घरको काम सकाएर, कलङकीबाट ट्याङ्गलाफाँटको उकालो चढेर बिश्वविद्यालय पुग्दा मेरो सास फुलिसकको हुन्थ्यो । थकाई लाग्थ्यो । तर कक्षामा प्राध्यापक भने नियमित हुँदैनथे । कहिले काहिँ त बिदेशको कन्फरेन्समा भनेर महिनौं दिन कक्षा खाली हुन्थ्यो । कक्षा चलेको बेला प्राध्यापकले एक लेक्चर मै पाँचवटा किताव सक्यो भनेर घोषणा गर्दथे । बिद्यार्थीहरुले पद्म प्रसाद देवकोटालाई अलि कडा अनुशासनको भनेर चिन्दथे, तर उनकै कक्षा पनि नियमि पढ्न पाउँदिनथें । पढ्ने धोको भएर के गर्नु, तीन चार पिरियड लगातार खाली हुनुलाई बिश्वबिद्यालयले सामान्य नै मान्दोरहेछ ।
खाली पिरियडमा किताव च्यापेर बिश्वबिद्यालयको एकान्तमा र पुस्तकालयको कुनामा बसेर चुपचाप पढ्न खोज्थें । तर युवा पुस्ताहरुलाई मेरो रहर र बाध्यता बारेमा के सरोकार? उनीहरु आफ्नै सूरमा हुन्थे । उनीहरु मैले पढिरहेको देखे भने अन्जानबस दिदी के पढ्नु भो, खै खै भनेर पुस्तक पल्टाउन आईपुग्थे । म पनि पढ्छु भोली ल्याईदिन्छु है भनेर माग्थे । मैले नाई पनि भन्न सक्दिनथें र दिन्थें । भोली, पर्सि वा हप्तौं दिन सम्म उनीहरुसंग मेरो भेट हुँदैनथ्यो र ती पुस्तकहरु फर्किंदैनथे । त्यसमा दुईवटा त त्यहाँको पुस्तकालयको थियो । मैले हाल सम्म पनि बुझाउन सकेकी छुईन । त्यसको लागि बिश्वबिद्यालय प्रति म क्षमाप्रार्थीछु । नियमित पढ्न नपाउँदा बिश्वविद्यालयको ती पाठ्य पुस्तकहरु पनि मेरो लागि धेरै लाग्ने गर्दथ्यो । प्राध्यापकहरुले सोध्ने प्रश्नहरुको फटाफट जवाफ फर्काउन नसक्दा आफैमा ग्लानी हुन्थ्यो ।
किर्तिपूरको त्यो बिश्वबिद्यालयमा अध्ययन गर्दा मैले एउटा बिचित्रको अनुभव गरें । कक्षाकोठाका बेन्चहरु बाल्यकालका सरकारी प्राथमिक विद्यालयको भन्दा गए गुज्रिएका हुन्थे । कक्षाकोठाको भुईको प्लास्टर फुटेर देखिएको माटोबाट विरुवा उम्रिरहेको हुन्थ्यो । झ्यालका सिसाहरु फुटेका हुन्थे र जाडोमा चिसो र बर्षामा पानीको छिर्काहरुको सामना गर्नु पर्दथ्यो । एकदिन त पद्म देवकोटाले पढाईरहेको बखत एक हूल केटाहरुले झ्यालतिर ताकेर पानी भरिएको बेलुनले किताव कापीहरु भिज्ने गरी हाने ।
बिश्वबिद्यालयमा सवभन्दा सकसको कुरा शौचालय थियो । महिला र पुरुष बिद्यार्थीको लागि छुट्टा छुट्टै शौचालयहरु भए पनि दिनहुँ जसो शौचालय पुग्ने बाटो समेत पिसाबले भरिएको हुन्थ्यो । कहिले काहिँ पाईलाले टेक्नको लागि ठाउँ ठाउँमा ईंटा ओछ्याइएका हुन्थे । भित्ता र ढोकाभरि फोहर पोतिएका र पुछिएका हुन्थे । पुछिएका कागजको थुप्रो र महिलाहरुका महिनावारीका पायडहरु समेत जताततै फालिएका हुन्थे । उच्च शिक्षा पाउन र बुद्धिजिबी बन्न तम्सेकी म त्यो दुर्दशा देखेर जिल्लिँथें । त्यो बेला मलाई हतार हतार आफ्नै कोठामा फर्कनुको बिकल्प हुँदैन्थ्यो । परिक्षाको लागि राम्रो तयारी नपुग्दा परिक्षामा मेरो हाजिर टुट्थ्यो । जाँगर नचले पछि पढाई नै छोडें । तर पढ्ने धोकोले भने मलाई पछ्याएको पछ्याई गर्यो । पुनः मैले पाटन क्याम्पसमा समाजशास्त्रमा भरना भई अध्ययनलाई पुन निरन्तरता दिएँ र स्नातकोत्तर पार गरें । मेरो ज्ञान, आत्मबिश्वास र क्षमताबृद्धिमा केहि सहयोग गरेको अनुभव गर्न मलाई करीब पन्ध्रबर्ष लाग्यो ।